Jose Mourinho:- Waa In Aan Ixtiramaa Zidane, Waanan Maqlay Xantaa, Waanan Ka Xumahay. |
Jose Mourinho:- Waa In Aan Ixtiramaa Zidane, Waanan Maqlay Xantaa, Waanan Ka Xumahay.
Jose Mourinho ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya inuu ku laabanayo Real Madrid isagoo ku sababeeyay in Los Blancos ay haatan heysato tababare Zinedine Zidane.
Ninka reer Portugal ayaa bilaa shaqo ahaa tan iyo markii uu ka tagayo Manchester United waxaana si joogta ah loola xiriirinayay shaqada Los Blancos ka dib markii Real Madrid ay guuldarro 3-0 ay ka soo gaartay PSG kulankii Champions League ee habeenkii Arbacada.
Markii la weydiiyay haddii uu mar kale u sharaxan yaahy shaqada Madrid waxa uu yiri: “Waxaa jira labo nooc oo xan ah. Tan koowaad waa mid ay dadku ka hadlayaan Zidane kaasoo inaga mid ah, anaga dhan ayayna tan nagu dhacdaa marka kooxdeena aysan si fiican u ciyaareynin. Waa wax ay tahay inaad la noolaato.
“Zidane noloshiisa oo dhan ayuu qeyb ka ahaa kubada cagta, wuuna yaqaanaa sida ay tahay. Xanta labaad waa in magaceyga lagu soo darayo xaalada, mana jecleysan taas. Dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin ixtiraamka waa mid kale.”
Isagoo ka hadlayay suurtogalnimada uu mar labaad ku maamuli doono Real, waxa uu yiri: “Ma doonayo inaan ku laabto sababtoo ah waxay heystaan tababare, mana hogaamin karo koox tababare heysata.
Waxaad ka hadli kartaa ixtiraamka kooxda laakiin waa in sidoo kale la ixtiraamo tababaraha.
“Banaanka ayaa ka joogaa arintaan. Ma ahi qof iibinaya warar been abuur ah. Waxaan doonayaa in wax walba ay u hagaagaan Zidane, islamarkaana wax walba la xaliyo.”